Xaaladda dhaawacyada Qatar la geeyey – Radio Daljir
Xaaladda dhaawacyada Qatar la geeyey
Luulyo 27, 2019 11:03 b 0
Dowladda Qatar oo horay loogu eedeeyey inay qayb ka tahay dowladaha Soomaaliya dhibaatada ka wada ayaa dalkeeda u qaaday dhaawacyadii qaraxii kadhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir.
Dhaawacyada oo gaarayay 12 xubnood oo isugu jiray dhaawacyo hore iyo dhaawacyadii qaraxii Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir ayaa waxaa la dhigay Isbitaalka ugu weyn ee dowladda Hamad General Hospital ee magaalada Doxa.
Dhaawacyada ayaa labo qeyb loo kala qeybiyay, qeyb dhaawacyada culus oo uu ku jiro Guddoomiye Eng, Yariisow oo la dhigay qeybta sare ee dhismaha Isbitaalka Hamad, halka qeybta kale la dhigay ee hoose.
Ehelada dhaawacyada ayaa la dejiyay Hotel ku dhow Isbitaalka, si ay xaaladooda ula socdaan, waxaana Safaaradda Soomaaliya ee Doxa ay qaabilsaneyd howlaha isku xirka ehelada iyo bukaanada.
Guddoomiye Yariisow ayaa hadda lala tacaalayaa xaaladdiisa caafimaad.
Garoonka Dhuusomareeb oo ay la wareegeen ciidamo
Madaxwaynaha Puntland oo talooyin usoo jeediyay qorayaasha Soomaaliyeed (dhegayso)